Ignacio Sala | | Wararka IPhone, iPhone SE
Mar kasta oo ay sii ahaato ka yar taariikhda loo malaynayo in la soo bandhigayo iPhone 5se cusub iyo iPad Air 3. Taariikhda la filayay in la xareeyo, wali waxay sugeysaa xaqiijinta rasmiga ah, waa Maarso 15. Saddex maalmood ka dib, sida uu sheegayo Mark Gurman 9to5Mac labada qalabba waa la siidayn doonaa, taariikh aad u gaaban oo udhaxeysa soo bandhigid iyo iib. Waxaan sii wadeynaa ka hadalka iPhone-ka, markan ku saabsan iPhone 7, oo ah sida laga soo xigtay dhammaan falanqeeyayaasha Jack mm 3,5 mm waa dhintay oo ay u badan tahay in Apple aanu ku soo dari doonin moodeelka cusub, maaddaama ay u muuqato inay soo bandhigi doonto samaacado sameecado leh hillaac ku xiga iPhone-ka cusub. Adoo ku siinaya booskan, Apple wuxuu dooran lahaa inuu ku daro afhayeen cusub meeshaas. Dhamaadka, wax walba waxay umuuqdaan inay tilmaamayaan TSMC soosaarka processor-ka cusub ee A10 ee iPhone 7 cusub.Toddobaadkan waxaan daabacnay ogeysiis la yaab leh, oo ka imanaya barnaamijka ay soo saartay shirkadda Apple, ilaa haddii aan dhigno taariikh kahor 1970, iPhone ayaa burbura mana dhacdo usbuuca. Nasiib wanaagse waxaa jira xal loogu talagalay cayayaankan in ka duwan qaladka 53 hadii ay xal leedahay. Sida uu ku soo waramay wariye Hollywood ah, Apple si ay u bilawdo duubitaankeedii taxanaha ahaa ee u gaarka ahaa Apple Music, oo ka sheekeynaya nolosha Dr. Dre, oo ka mid ahaa aasaasayaashii Beats Music haatana ah madaxa Apple. Dr. Dre laftiisa ayaa ciyaari doona kaalintiisa.
Haddii aan ka hadalno codsiyada, toddobaadkan Telegram ayaa mar kale la cusbooneysiiyay, ku darista shaqooyin cusub oo noo ogolaanaya inaan xakameyno kooxaha halkaas oo ay naga mid yihiin, waa ikhtiyaar weyn oo noo ogolaanaya inaan ka fogaano habeenkaas waxaan joognaa kooxo kala duwan halkaas oo aan si buuxda u naqaano cidna. Microsoft codsigeeda Fletch kuu ogolaanaya inaad si dhakhso leh u ogaato nooca eyga ee su'aasha leh sawir. Isbuucaan Mesh app ee usbuuca ciyaar tirooyinka xiisaha leh iyo kuwa balwadda leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone SE » Ugu fiican usbuuca ee ku jira Actualidad iPhone